स्वास्थ्य Archives - RatoKalam.com is No one news portal.
भुलेर पनि पुनः तताएर नखानुहोस् यी खानेकुरा, विष सरह बन्न सक्छ
स्त जीवनशैलीमा हामी धेरैजसो कि बाहिरको खाना खान्छौ, कि त घरमै भएका खाना सेलाएपछि तताएर खान्छौँ वा दुई पटक खाने खाना एकै पटक पकाएर राख्छौ र पछि तताएर खान्छौ । तर, के तपाईलाई थाहा छ, कुनै – कुनै खानेकुरा सेलाएपछि तताएर खाएमा स्वास्थ्यलाई हानि गर्छ ? त्यसो भए, जान्नुहोस्, कुन–कुन...
लिङ्ग सानो भयो ? चिन्ता नलिनुहोस ! नयाँ तथ्य यस्तो आयो
काठमाडौ । लिंगको आकार सानो भयो भनेर धेरै पुरुषहरु चिन्ता लिने गर्छन् तर अब चिन्ता नलिनुहोस् । हालै गरिएको एक अध्ययनले लिंग ठुलो हुने भन्दा पनि लिंग सानो हुने घरबार नटुट्ने बताएको छ । अमेरिका र केन्याका अध्ययनकर्ताहरुले लिंगको आकार र वैवाहिक जीवनमा असरका बरेमा अध्ययन गरेका थिए । उक्त अध्ययनमा...
श्रीमान्को स्थायी बन्ध्याकरण गर्दा कमजोर हुने भएकोले बन्ध्याकरण गर्न दिँदैनन् महिला
डोटी, ९ चैत विमलबहादुर विष्ट बडीकेदार गाउँपालिका अत्तरकाँडाकी कल्पना (नाम परिवर्तन) आफ्ना श्रीमान्सँगै वडा नं २ खड्यौली पुग्नुभयो । उहाँ स्थायी बन्ध्याकरणका लागि त्यहाँ पुग्नुभएको थियो । उहाँका श्रीमान्ले आफू स्थायी बन्ध्याकरण गर्न जिद्धी गर्दै हुनुहुन्थ्यो तर कल्पनाका अगाडि उहाँको जिद्धीले काम गरेन । कल्पनालाई स्वास्थ्यकर्मीले पनि सम्झाउन खोजे तर उहाँले कसैले भनेको...
कुन देशका पुरुषको लिङ्ग कति लामो ? नेपाल सहित २५ देशको सुची हेर्नुहोस
काठमाडौं। पुरुषको लिंगलाई लिएर विभित्र देशमा अध्ययन तथा अनुसन्धान भइरहेका हुन्छन् । लिंगको आकार र प्रकारको विषयमा पनि विशेष चासो राखेको देखिन्छ । विशेष गरी यौन सन्तुष्टीमा लिंगको आकारले फरक पार्छ भन्ने भ्रम पनि फैलिरहेको पाइन्छ । लिंगको आकारले भने यौन जीवनलाई कुनै प्रभाव पार्दैन । तर पनि यसको आकारलाई लिएर...
नारायण अधिकारी चितवन, २ चैत छिमेकी जिल्ला मकवानपुरमा कुखुरामा बर्डफ्लु देखिएपछि जिल्लामा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ । पोल्ट्रीको राजधानी मानिने यस जिल्लामा भित्रने नाकाहरुमा पक्षी जन्य वस्तु आयातमा कडाइ गरिएको छ भने कृषकलाई जैविक सुरक्षामा ध्यान दिन अनुरोध गरिएको छ । भेटेनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्रका निमित्त प्रमुख डा पर्शुराम फुयालले...
काठमाडौं । मानिसहरुका लागी हरेक कुरा सिमित मात्रामा गर्यो भने त्यसले फाइदा पुग्छ । नेपाली समाजमा यौनसम्पर्कलाई अत्ति साँघुरो रुपमा बुझ्ने गरिएको छ । सामान्य रुपमा बुझ्ने हो भने, यौनसम्पर्क एकप्रकारको शारीरिक व्यायम हो । स्वस्थ्य रुपमा गरिएको यौनसम्पर्कले मुटुजन्य रोगीहरुलाई समेत राम्रो प्रभाव पार्छ । त्यतिमात्रै होइन नियमित रुपमा मिलाएर...
हस्तमैथुन गर्दा क्यान्सर नलाग्नेदेखि अन्य फाइदाहरु, भ्रम र वास्वितवता जान्नुहोस् !
काठमाडौं । नेपालभर डा. खेम कार्की यौन रोगीहरुका लागी एकदमैं प्रख्यात नाम हो । उहाँले पछिल्लो समय धेरैको ज्ञिसाको विषय बन्दैं गरेको हस्तमैथुनबारे केही कुराहरु राख्नु भएको छ । हस्तमैथुन भन्नाले हातले अथवा केही साधन प्रयोग गरेर, यौनाङ्ग चलाएर, हल्लाएर वा खेलाएर यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने विधि हो । यसलाई...
गौशाला, १ चैत महोत्तरी जिल्लामा १३३ जना कुष्ठरोगी रहेको खुलासा भएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय अधिकृत विनोद झाका अनुसार १० नगरपालिका तथा पाँच गाउँपालिका रहेको महोत्तरी जिल्लामा १३३ जना कुष्ठरोगी रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले जिल्लाको १३३ जना कुष्ठरोगीमध्ये ७४ जनामा बढी सर्ने कीटाणुको सङ्क्रमण रहेको तथा ५९ जनामा कम सर्ने...
‘मिर्गौला दान गर्नुस्’-डा ऋषिकुमार काफ्ले
लमही, १ चैत वरिष्ठ मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा ऋषिकुमार काफ्लेले मृर्गौला दान गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ । विश्व मिर्गौला दिवसको अवसरमा बिहीबार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आयोजना गरेको नसर्ने रोगसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले आफ्नो मृत्युपछि पनि आफन्तको ज्यान बचाउन सकिने भन्दै मृत्युपछि मिर्गौला दान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन अनुरोध गर्नुभयो । “सबैभन्दा पहिला मानिसको...